သမိုင်းတစ်လျောက် ပရိတ်သတ်အမုန်းခံရဆုံး ယူနိက်တက် ကစားသမား၄ယောက် – FBV SPORT NEWS
သမိုင်းတစ်လျောက် ပရိတ်သတ်အမုန်းခံရဆုံး ယူနိက်တက် ကစားသမား၄ယောက်
June 8, 2021 By admin Sports News
စာဖတ်သူတွေလည်း အပြောင်းအရွေ့သတင်းတွေကြားထဲ ပျင်းရိငြီးငွေ့နေပြီဆိုတော့ တခြား အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပဲဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ သမိုင်းကြောင်းတစ်လျောက် ယူနိက်တက်ဖန်တွေသာမက တခြားအသင်းရဲ့ဖန်တွေကပါ အမုန်းခံရတဲ့ ယူနိက်တက် ကစာသမား ၄ယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အဲ့ဒီကစားသမား ၄ယောက်က ဘယ်သူတွေလဲ? သူတို့ကိုဘာလို့အမြင်ကပ်ကြတာလဲ? သူတို့ကိုမကြိုက်တဲ့အကြောင်းတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်….ပရိတ်သတ်တွေအမြင်ကပ်အမုန်းခံရဆုံးကစားသမား၄ယောက်
ယူနိက်တက်ကိုရောက်လာပြီးမှနောက်အသင်းကိုပြောင်းသွားတိုင်း ယူနိက်တက်ပရိတ်သတ်တွေကမုန်းတတ်ကြတာမဟုတ်ပေမယ့် ကာလို့တီဗက်စ်ကတော့ ပရိတ်သတ်တွေရော ယူနိက်တက်ကစားသမားတွေရောအမုန်းခံခဲ့ရပါတယ်။ တိဗက်ဟာ ၂၀၀၆မှာဝက်စ်ဟမ်းမှာရှိနေခဲ့ပီးတော့ ၂၀၀၇မှာယူနိက်တက်ကိုရောက်လာပါတယ်။ ၂၀၀၉မှာတော့ လီဗာပူးဆီပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကောလဟာလတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
သူ့အနေနဲ့တော့ အိုးထရက်ဖို့ကိုသစ္စာဖောက်တယ်လို့မခံယူပေမယ့် သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ ပရိတ်သတ်တွေမုန်းစရာဖြစ်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတိဗက်ဟာအိုးထရက်ဖို့ကနေ မန်စီးတီးကိုပြောင်းသွားခဲ့ပြီး”မန်ချက်စတာမကိုကြိုဆိုပါတယ်”ဆိုတဲ့ပိုစတာကြောင့် သူ့ကိုပရိတ်သတ်တွေစတင်ပြီးအမြင်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ပိုပြီးဆိုးတာက အာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်ဖြစ်တဲ့တိဗက်ဟာ အိုးထရက်ဖို့ကိုပြိုင်ဘက်အနေနဲ့ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးမန်စီးတီး ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားရခဲ့တဲ့၂၀၁၂ရာသီမှာ ကွင်းထဲမှာ ဖာဂီကို “RIP FERGIE”ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ပီးလှောင်ခဲ့တဲ့အတွက် သူ့ကို ယူနိက်တက်ပရိတ်သတ်တွေအလွန်မုန်းသွားကြပါတော့တယ်။သူ့ကိုပရိတ်သတ်တွေကတောင်းပန်ဖို့တွန်းအားပေးကြပေမယ့်သူကတော့လုံးဝမတောင်းပန်ခဲ့ပဲသူမှန်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မိုက်ကယ်အိုဝင်ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့သမိုင်းထဲမှာအမှတ်တရဖြစ်စရာတွေအများကြီးရှိခဲ့သလိုပဲပရိတ်သတ်တွေရဲ့နောက်စရာပြောင်စရာအဖြစ်တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ မိုက်ကယ်အိုဝင်ကို ခေါ်ယူမယ့်အသင်းမရှိတော့ချိန် အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိက်တက်ကခေါ်ယူခဲ့တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။
အိုဝင်ဟာ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာလီဗာပူးအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ပြီး ယူနိက်တက်ကိုရောက်ချိန်မှတော့ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေထဲကလူးလဲပြီးရောက်လာတာဖြစ်လို့ ယူနိုက်တက်ပရိတ်သတ်တွေက အိုဝင်ကိုသိပ်မနှစ်မြို့ခဲ့ကြပါဘူးဒါပေမယ့်လည်း အိုဝင်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ပွဲတွေမှာ သွင်းယူပေးတဲ့ဂိုးတွေကြောင့် တခြားပရိတ်သတ်တွေရဲ့အမုန်းကိုခံခဲ့ရပြီးမန်ဖန်ပရိတ်သတ်တွေရဲအချစ်တွေကိုတော့သိမ်းပိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူး ယူ၁၅အသင်းမှာစတင်ပီးလေ့ကျင့်သင်ကြားလာခဲ့တဲ့ အိုဝင်ဟာ လီဗာပူးအသင်းနဲ့အတူအောင်မြင်မှုများစွာကိုရယူနိင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာလည်း အိုဝင်ရဲ့နာမည်ဟာ တတွင်တွင်ခေါ်နေခဲ့ရတဲ့ ခေတ်ကောင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးနဲ့ဂိုးသွင်းဘုရင်ဆုတွေရယူခဲ့ဖူးသလို ဖလား၅လုံးတစ်ပြိုင်တည်းရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အိုဝင်ဟာ လီဗာပူးမှာ ၈ရာသီကြာကစားခဲ့ပြီး ၁၅၈ဂိုးထိသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။မိုက်ကယ်အိုဝင်ဟာထိပ်တန်းကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် လိဒ်နဲ့ပွဲမှာရခဲ့တဲ့တံကောက်ကြောဒဏ်ရာနဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အိုဝင်ဟာ ရီးရဲမက်ဒရစ်မှာလည်းအရံကစားသမားဖြစ်ခဲ့ရသလို
အဲ့ဒီနောက် ပေါင် ၁၆သန်းကျော်နဲ့ နယူးကာဆယ်ကိုပြောင်းရွေ့ခဲ့ပြီးနောက် ကစားခွင့်ပိုရတဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွေ့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအသင်းမှာလည်း အိုဝင်ဟာ ဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့ရောက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ၄ရာသီကစားပြီးတဲ့အချိန် ဂိုး၃၀သာသွင်းယူခဲ့ပြီး အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ အိုဝင်ကို မန်ချက်စတာယူနိက်တက်နည်းပြကြီးဖာဂူဆန်က ၂၀၀၉ခုနှစ် ဇူလိုင်လ၃ရက်နေ့မှာတော့၂နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူလိုက်ပါတော့တယ်။
မန်ယူဟာဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့အိုဝင်ကို တစ်ပွဲကစားရင်တစ်ပွဲစာပေးတဲ့စနစ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူရဲ့နာမည်ကျော် ကျောနံပါတ် ၇ကိုဝတ်ဆင်ကစားခွင့်ရခဲ့တဲ့အိုဝင်ဟာ အဲ့ဒီနှစ် ဩဂက်လ ၁၆ရက်နေ့မှာ ဘာမင်ဂမ်အသင်းနဲ့ကစားပွဲမှာ လူစားဝင်ကစားသမားဘဝနဲ့စတင်ပွဲထွက်ခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူအတွက်ပထမရာသီမှာအိုဝင်ဟာ ၃၁ပွဲကစားပြီး ၉ဂိုးသာသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူဟာ အိုဝင်နဲ့ ၂နှစ်စာချုပ်သာချုပ်ဆိုခဲ့ပေမယ့် သူရဲ့အရေးပါတဲ့သွင်းဂိုးတွေကြောင့်‌ နောက်ထပ်၁နှစ်ထပ်မံသက်တမ်းတိုးချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
၃ရာသီကြာခဲ့တဲ့အိုဝင်ဟာ ၅၇ပွဲမှာ ၁၇ဂိုးသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့၂၀၁၂ခုနှစ်မှာတော့ မန်ယူက သက်တမ်းမတိုးတော့တဲ့အတွက် အိုဝင်တစ်ယောက်စတုတ်စီးတီးအသင်းကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။ဒီနောက်မှာတော့ တစ်ဂိုးသာသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ကစားသမားဘဝအဆုံးသတ်သွားပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် အိုဝင်ဟာ ခုထိ ဘောလုံးဝေဖန်ရေးနဲ့ခန့်မှန့်ရေးတွေလုပ်နေပြီး မှန်းတိုင်းလွဲလို့ မန်ဖန်တွေက သူယူနိက်တက်ရောက်လာကစတုန်းကလိုသူ့ကိုလှောင်ရယ်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်တို့ရဲ့ လိဂျန့်ကြီး ဂယ်ရိနဗီးလ်ကတော့ လက်ရှိမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Sky Sport တီဗီမှာ အိုဝင်တို့လိုပဲ ဝေဖန်ရေးနဲ့လေကန်ရေးလုပ်နေတဲ့ လူသိရှင်ကြားစတားတစ်ယောက်ဖြစ်နေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကို မန်ယူပရိတ်သတ်တွေကချစ်ပေမယ့်သူ့ကို လီဗာပူးမြေမှာတော့လုံးဝလက်မခံပဲ မုန်းတီးကြပါတယ်”ဂယ်ရီနဗီးလ်ကအနီ,သူကလီဗာပူးဆိုမုန်းနေတာ”ဆိုပြီးပရိတ်သတ်တွေက စွပ်စွဲပြီးသူ့ကိုအပြင်းအထန်ဝေဖန်ပီးမုန်းတီးခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။
အမုန်းလည်းခံရလောက်ပါတယ်.နဗီးလ်ဟာ လီဗာပူးကိုကြည့်ရင်းအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကမှာ အဓိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပေမယ့် သူဟာသရဲနီတွေရဲ့ ခေါင်းကိုင်ဖခင်ကြီး ဆာအဲလက်နဲ့ အိမ်မက်ကဇာတ်ရုံကြီးမှာ သစ္စာရှိတဲ့သရဲနီတပ်သားစစ်စစ်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါပဲ။သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးအတ္တုပတ္ထိကိုတောင် “Red”လို့ပေးခဲ့ပြီး”သူဟာRedတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အခုထိလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး အကြံပေးမှုတွေလုပ်နေသလို လီဗာပူးနဲ့ပက်သက်ရင် ရန်ငြိုးဖွဲ့ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုဘယ်တုန်းကမှမပျက်ကွက်ခဲ့ပါဘူး။နဗီးဟာ မန်ယူတစ်သင်းတည်းမှာသာကစားခဲ့ပြီး သူနောက်ဆုံးကစားသမားဘဝအချိန်ထိ ၁၀နှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ သရဲနီတပ်သားကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်. မန်ယူမှာ ရွိင်ယန်ဂစ်ပီးရင်သူဟာသက်တမ်းအကြာဆုံးကစားသမားတစ်ဦးပါပဲ။
ရွိင်ကိန်းကတော့ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ပရိတ်သတ်တွေသာမကပဲ ကမ္ဘာတစ်လွားမှာရှိတဲ့ အသင်းတိုင်းလိုလိုရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကြားထဲမှာ ဖိုက်တာကြီးဆိုပြီး လွှမ်းမိုးထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ကစားပုံကြမ်းတမ်းပြီးဒေါသထွက်လွယ်လွန်းတဲ့ အကျင့်ကြောင့် သူ့ကို မုန်းကြပြီး အထူးသဖြင့်တော့မန်စီးတီး ပရိတ်သတ်တွေက သူ့ကိုတော်တော်လေးအသဲနာကြပါတယ်။
ရွိင်ကိန်းရဲ့ အကြီးမားဆုံးအမှားနဲ့ အလွန်မုန်းစရာကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုဟာ ၂၀၀၁ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိတ်သတ်တွေသာမက အဲ့ဒီတုန်းကရွိင်ကိန်းကို မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဖန်တွေကပါ ဝိုင်းဝန်းဝေဖန်ကြပြီး တချို့ဆို ရွိင်ကိန်းကို တော်တော်ရွမုန်းသွားကြတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒါကတော့ ၂၀၀၁ခုနှစ် မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲမှာ အိုင်ရစ်သား ရွိင်ကိန်းဟာ မန်စီးတီးအသင်းက နော်ဝေးနိုင်ငံသားAlf Inge Haaland ကို အရင်ပွဲက အငြိုးနဲ့ချိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွိင်ကိန်းဟာအဲ့ဒီပွဲမှာ အနီကဒ်ပြခံခဲ့ရပြီး သူ့လုပ်ရပ်အတွက်နောင်တမရဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
” ငါ့ပင်ရင်းစိတ်အရတော့ယီးပဲ.သူရသွားတာသူလုပ်ခဲ့တာရဲ့ဆုလာဒ်ပဲ။ သူငါ့ကိုအရင်စမိုက်ရိုင်းခဲ့လို့ ငါပြန်ရိုင်းတာ။ ငါ့ဝါဒကတော့မျက်လုံးတစ်လုံးအတွက်မျက်လုံးတစ်လုံးပဲ”လို့အင်တာဗျူးမှာလည်းအဲ့ဒီတုန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်.
Alf Inge Haaland ကတော့ ဒီဒဏ်ရာနဲ့ပဲ သူ့ကစားသမားဘဝအဆုံးသတ်ချိန်ကို ဖြတ်သန်းလိုက်ရပြီး ရွိင်ကိန်းဟာ ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာတော့ ဆာအဲလက်နဲ့ ယူနိက်တက်အသင်းသားတွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့အတူ ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဖြစ်လာပါတောတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ရွိင်ကန်းဟာဆဲလ်တစ်ကိုပြောင်းသွားပီးခုနောက်ပိုင်းတော့ ယူနိက်တက်နဲ့ပက်သက်ရင် မထိတထိဝေဖန်ရှုတ်ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်နေပါတော့တယ်။
ပေါ့ဘာကိုFree Transferနဲ့ဆုံရှုံးရမှာကြောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ယူနိက်တက်